Kuyinto imfihlo ukuthi omunye ethandwa kakhulu iholidi izindawo e Thailand Phuket. Le ndawo kungaba jabulisa yisiphi isihambi ngemibala egqamile bemvelo, ngesimo sezulu esihle futhi okusezingeni eliphezulu service quality. By the way, emaningi kuyinto Patong Bay. Lapha loMfula lenqwaba amahhotela. Omunye wabo Ibis Phuket Patong Ihhotela.
Ukuhlela ngokufanele - isihluthulelo iholide okuhle ngempela. Ngakho-ke ngaphambi ukukhetha elilodwa noma kwenye ehhotela, nganoma yisiphi isihambi esizama ukuthola isamba esiphezulu kolwazi. Vala hotel zikhona izitolo, amathilomu kanye ebhishi? Ingabe kukhona izimo nijabula nomndeni wonke? Ngingaba lodger sibalela ukudla okuhle, induduzo lula?
Indawo kanye nezici zayo
Njengoba yaziwa, kukhethwa izindawo kokuma kufanele ukwazi indawo yakhe. Isakhiwo ehhotela Ibis Phuket Patong 3 * sinendawo sasivumela evumayo. Sishilo kakade ukuthi kule Patong bay. Ibanga wasolwandle abadumile imayelana 500 m. Ukuze ogwini kuyinto ithrekhi ukhululekile, ngakho nsuku zonke ohamba izivakashi, njengoba umthetho, hhayi umthwalo. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa zomphakathi zokuhamba nehhotela Ukudluliselwa, kudingeka nje cela ngaphambi kokuthi ride.
Zilinganiselwa ku-20 km itholakala the Phuket main - uhlobo maphakathi esiqhingini nenqwaba ezikhangayo futhi eziningi izivakashi abeza lapha njalo ngonyaka. Kodwa umgwaqo ngeke kuthathe imizuzu engaphezu kuka 20-30 kusuka esikhumulweni sezindiza (endleleni, ehhotela unikeza isevisi yokudlulisa).
lwati lolufinyetiwe ingqalasizinda ihhotela
Hotel Ibis Phuket Patong - a eziyinkimbinkimbi Usayizi medium. Insimu incane, kodwa enhle, eluhlaza futhi kuqashwe ubusuku nemini. indawo 5000 square metres. Maphakathi kukhona isakhiwo esikhulu emihlanu-storey, elakhiwa ngo isitayela yesimanje. By the way, ihhotela wavulwa hhayi kudala, ngonyaka ka-2008. Kukhona kakade wakwazi kabusha, ngakho isakhiwo bayokwazisa idizayini enhle kanye nokuvuselelwa kwazo fresh.
Ihhotela has ikheshi, okufaneleyo. Phela, esitezi sokuqala yenzelwe ukusetshenziswa umphakathi zasendlini - lokumamukela edeskini, yokudlela kanye ibha, kanye lounge nezinezingadi SOFAS kanye ikhofi amatafula lapho ungakhululeka noma ulinde inombolo isheke-in.
imikhakha Igumbi olunikezwa ihhotela
Hotel Ibis Phuket Patong Ihhotela inikeza amakhasimende ayo isheke kwelinye 258 amakamelo. Ngokwengxenye enkulu lawa amancane, kodwa ethokomele kakhulu Igumbi ejwayelekile amabili olulodwa noma eyodwa enkulu usayizi yinkosi embhedeni. Kukhona okuthiwa Hollywood amakamelo - endaweni yabo kancane, kanye nomklamo ngaphezulu yasekuqaleni.
Ngaphezu kwalokho, inkonzo yakho Family Suites - namakamelo abanzi eyenzelwe 3-4 abantu. Ziyakwazi ezinkulu abantu ukuhamba nezingane, kanye izinkampani ezinkulu. Yiqiniso, la makamelo aphindwe emikhulu, nge ophilayo ingalali ndawo.
Hotel Ibis Phuket Patong 3 * (Thailand, Patong Beach, Phuket): Incazelo ye amakamelo
Yiqiniso, lapho sasihlose bahlale izinsukwana ehhotela, kuyafaneleka ngizibuza izimo zokuphila. izivakashi Owabe ukukhuluma kahle ngale ndawo. Amagumbi kahle futhi sizilungise ngempela ivulekile. A kuvulandi ayimfihlo ifenisha lapho ungakhululeka emoyeni opholile.
Yiqiniso, at service yakho, nemishini yesimanje. Ikakhulukazi, ukwakha izimo lokushisa ezimnandi zasendlini can, usebenzisa enamandla air conditioning system. Ngokusho televizoru postoyaltsy smotryat sputnikovye kanaly (lapho ngisho Russian eyodwa). Omunye izici ucingo kanye ephephile electronic. Lapho isicelo, izivakashi ngesikhathi isibonelelo kanye nezinye izikhungo yensimbi ayina. Esikhathini mini-bar agcwaliswa supply nsuku zonke amanzi okuphuza (zonke ezinye iziphuzo kukhona eyengeziwe). Kukhona i yokucela eclectic, ikhofi, itiye, futhi kudingekile ukupheka zabo izinto.
Indlu yangasese incane, kodwa nobuchwepheshe besimanje. Yebo, futhi amazinga yokuhlanzeka kuyagcinwa - bahlanza nsuku zonke futhi kuhlanganisa namanje futhi esikhundleni amathawula. It unikeza yokugezela Izinsiza kanye hairdryer elula umile.
Kuthiwani ngokudla sipho izivakashi?
Kuhlala ekhatsi Ibis Phuket Patong 3 * ehhotela kuhlanganisa ibhulakufesi nsuku zonke. Badlula ngesimo a lezitsha e yavula ikamelo layo elikhulu yokudlela ehhotela. Izivakashi bathi lapha nawe ungadla esimweni esikhululekile. Ukukhethwa ukudla nakuba amancane, kodwa okuthile okuhle ukudla, ungahlala ukhetha. Emigqeni ukudla lapha, futhi ukudla asanda walungisa. By endleleni, uqaphele khona izivakashi ezahlukene nezithelo ezisanda kukhiwa ezitholakala angavamile.
Izimenywa zingabelana adle lapha yokudlela. Nokho, ukudla kusihlwa okuphekwe oda izivakashi futhi ngezindleko isidingo sokukhokhela ngokwehlukile. Ngakolunye uhlangothi, amanani bayizakhamuzi ezivamile, futhi izivakashi eziningi zithanda ukudla ke ehhotela.
Kunoma ikuphi, izinkinga ugesi musa kuphakama, ngoba indawo yokungcebeleka - ngaphakathi ukuhamba ibanga lenqwaba amathilomu nezindawo zokudlela yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Ungathenga ngisho ukudla nezitolo ezinkulu, futhi ogwini kungenzeka ukudla kahle.
Ezokuzijabulisa futhi lula ogwini
Yiqiniso, amabhishi amahle iholidi fun ngasolwandle - lena yinto elinde izivakashi, iza obakhathalelayo. Phuket. Ibis Phuket Patong Ihhotela itholakala cishe 500 metres kusukela Patong Beach. This elula ugu kubhekwa omunye ethandwa kakhulu - izinkulungwane zezivakashi ukuchitha amaholide abo lapha. Finyelela kolwandle ngezinyawo, endleleni futhi ungathathi isikhathi esiningi.
Lena lolwandle umphakathi, ngakho ngokuvamile aminyene lapha. Noma kunjalo endaweni chibi ukuhlanza futhi zigcinwe kahle. Lapha bahlanza izikhathi eziningana ngosuku, futhi umnyango kolwandle njalo ukusula. Izingane zizizwa lapha kahle, ngoba kukhona kwesigaba engajulile ikakhulukazi kulencane kakhulu ukugeza izivakashi. Ukuze imali encane ungakwazi ukuqasha izihlalo, isambulela azidle. By endleleni, le big lolwandle amathawula ekhishwe ehhotela.
Fans of iholidi bakhuthele ngeke be bored. Zonke ngasogwini kukhona sikuhlomele amanzi ezemidlalo izikhungo lapho ungakwazi ukuqasha watercraft (isikebhe, isikebhe), windsurfing amabhodi kanye nemishini snorkel. Beginners kusheshe ukuthatha inkambo, wasebenza nge abafundisi abangomakad 'ebona.
kungakhathaliseki eyengeziwe inkonzo sipho?
amakamelo Ukhululekile futhi ukudla kakhulu - yilokhu okudingayo for a holiday ezinhle. Noma kunjalo, ihhotela Ibis Phuket Patong Ihhotela inikeza izivakashi obuthile amabhonasi. Okokuqala, ake sithi ukuthi wamukelekile edilini ubusuku nemini, okuyinto ekahle kakhulu. Lapha uzothola bashintshisane lwemali phezu imali yamaphepha wendawo ngesilinganiso evumayo. Kungenzeka ukuqasha ephephile edilini lomshado (ukuze uthole ukuvikeleka esiphezulu). Ngezinye inkonzo yakho, futhi isitoreji umthwalo. Ukuze imali encane, izivakashi ujabulele i-Internet, futhi ijubane muhle ngempela.
samabhizinisi Ihhotela, lapho ungathumela ngefeksi. Nangu ezidingekayo kukhompyutha nehhovisi imishini, kanye eposini elincane. Eceleni isakhiwo hhotela endaweni yokupaka, lapho izivakashi ukujabulela mahhala. By the way, kokubili ihhotela kanye edolobheni, ungakwazi ukuqasha imoto - izivakashi eziningi ukwenza lokho, ngoba kokuba ezokuthutha akho kuvula amathuba amasha lokuhlola emzini.
Indlela ukuchitha isikhathi sakho e-ehhotela?
Hotel Ibis Phuket Patong Ihhotela uvame esetshenziswa kuphela njengendlela yokufaka - Inkatho eyinhloko isikhathi abahambi ukuchitha ogwini. Nokho, ungahlala uphumule ehhotela.
Egcekeni yezivakashi ke ifakwe yokubhukuda encane ngamanzi ahlanzekile. Lapho esebekwe ukuba abe azungeze imibhede ne omatilasi kanye baphathe nezambulela (endleleni, abo njalo ngokwanele, ngisho noma lokho kwakufaka isiphetho esiphezulu). On ithala, izivakashi ngokuvamile ukuzijabulisa bese uthole bazana.
Ngezinye isevisi yakho kukhona emakhazeni massage. Ngemva massage Thai idume emhlabeni wonke - ke okungenani kanye udinga uzame ngokwakho. By the way, masseurs ukusebenza usuku lonke, ngezinye izikhathi kuze kube sebusuku.
Ezokuzijabulisa uhlale kungenzeka ukuthola ngaphandle kwe Ibis Phuket Patong ehhotela. Thailand - izwe nge isiko emangalisayo kanye nomlando, amasiko ezithakazelisayo futhi emangalisa ezikhangayo yezakhiwo kanye zemvelo. Esikhathini ehhotela uqiniseka akusize ukuthi ukhethe futhi uthenge uhambo ezithakazelisayo noma nje aseluleke ezindaweni ezithakazelisayo kule ndawo.
Iholide nengane: ukunikela ehhotela?
Namuhla, abantu bayisa ezingasho ngokuvamile izingane uhambo. Yiqiniso, kulesi simo izithakazelo izivakashi kanye nosomabhizinisi imibuzo. Yini bangalindela izivakashi yehhotela "Ibis Phuket Patong"?
Eqinisweni, ihhotela kufanelekile amaholide umndeni. Ezinganeni kukhona izaphulelo. Inombolo ukuletha ngokushesha uhlaka ezengeziwe. Kodwa nokho anawo izivakashi kanye amakamelo esikhethekile somkhaya. Esikhathini yokudlela ungathola njalo okuthile okuhle futhi esihlwabusayo cishe kunoma yisiphi yingane.
Ebaleni izingane ifakwe ichibi ekhethekile - amanzi njalo kahle eshubile. Lapha, izingane zithande ukuba abhece e sabazali. Ukuze imali encane ungakwazi ukusebenzisa umhlengikazi oQeqeshiwe abanolwazi - amanani ehhotela akuyona liphezulu kakhulu. Phakathi edolobheni ungathola eziningi ukuzijabulisa izingane nabazali bazo.
Hotel Ibis Phuket Patong Ihhotela 4 *: izivakashi Izibuyekezo
Nasi inkhulumomphendvulwano nabantu abaye kakade wakwazi ukuchitha izinsukwana ezimbalwa ehhotela, kwesinye isikhathi ukunikeza ingcebo yolwazi ezibalulekile. Ngakho abakushoyo mayelana ehhotela "Ibis Phuket Patong 3 *"?
Cishe zonke izibuyekezo eshiywa yizivakashi, omuhle. Ihhotela incane kodwa ethokomele ngempela. Amakamelo asanda esilungisiwe, usule izinto zikagesi eziphezu emisha nemishini obusebenzayo egumbini lokugezela. By the way, izinkinga kungekho amanzi ashisayo.
Ukudla okumnandi ehhotela, futhi kukhona zokudlela ambalwa ezinhle lapho nawe ungadla behola imali encane. Omunye uye kuphela ukusho ukuthi abasebenzi ehhotela musa ukukhuluma isiRashiya. Ngakolunye uhlangothi, lokhu akubavimbeli ukuba inhlonipho futhi ngokushesha ukuxazulula izinkinga.
Enye plus omkhulu yilona eziphansi zokuphila, ikakhulukazi uma nawe wake wazizwa njengoGeorge kuleveli yesevisi. Ungakwazi ukuchitha ukuhlala obunokuthula ngempela futhi ukhululekile, ukuchitha imali encane kakhulu.
Cliff Burton Biography futhi lokusungula